IPodcast 10x26: Iveki yenguqu | IPhone iindaba
Iveki ezolileyo apho kungakhange kubekho zothuko lukhulu, kodwa asikuphosi ukudibana kwethu neendaba ezibalaseleyo. Ukwehliswa okungalindelekanga kwiKhayaPod, ukupheliswa kwemisebenzi kwiNetflix, ii-headphone ezinokuthi iiAmazon zifuna ukumilisela ukukhuphisana neeAirPods… Zonke ezi ndaba kunye nezinye ziya kucazululwa zivela kwi-podcast yethu. Ngaba uza kuyiphosa?
Njengoko besele siqalile kwisizini ephelileyo, kulo nyaka i-Actualidad iPhone podcast inokulandelwa ngqo ngejelo lethu le-YouTube kwaye ithathe inxaxheba kuyo ngengxoxo neqela lePodcast kunye nabanye ababukeli. Bhalisa kwisitishi sethu ukufumana izaziso zokuba ukuqala kokurekhodwa kwe-podcast, kunye naxa sidibanisa ezinye iividiyo esizipapasha kuyo. Ewe iya kuhlala ikho kwi-iTunes ukuze ukwazi ukuyimamela xa ufuna ukusebenzisa isicelo sakho osithandayo sePodcasts.. Sicebisa ukuba wena Rhuma kwi iTunes en IVoox okanye ngaphakathi Spotify ukuze iziqendu zikhutshelwe ngokuzenzekelayo zakuba nje zifumaneka. Ngaba uyafuna ukuyiva apha? Kulungile nje ngezantsi ukuba umdlali uyayenza. Sikwanayo Uluhlu lokudlala kwiApple Music Ngomculo odlala kwipodcast (ewe, sinayo nayo Spotify...).
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » podcast » IPodcast 10 × 26: Iveki yotshintsho